Kana iwe ukatenga online necomputer komputa, saka isu tine chinotyisa chipo chako! Ndiyo Swagbucks browser yekuwedzera iyo iwe yaunogona kurodha pasi yeGoogle Chrome kana Internet Explorer.
Neye Swagbucks browser yekuwedzera, unogona kuchengetedza mari pazvinhu zvekusimbisa muviri uye zvimwe zvese zvekutenga kuzvitoro zvako zvepaInternet zvakadai seAmazon, eBay, Walmart, Target, nezvimwe. Uchagamuchira mari kudzoserwa muzvitoro zvakasarudzika, makuponi akasarudzika, uye iwe unogamuchira yemahara $ 10 bhonasi kubva kwavari kana iwe uchinyoresa. Chikamu chakanakisa nezve ichi Swagbucks browser yekuwedzera ndechekuti iri 100% YEMAHARA kurodha pasi saka ita shuwa download it today kuchengetedza mari uye kuwana mari kumashure!
Paunenge uchangosaina Swagbucks, iwe iyo nhengo unofanirwa "Kubata" iyo Bonus muchikamu cheSwag Ups cheakaundi yako. Kukosha kwebhonasi kunowanikwa nenzira yemapoinzi, anonzi SB. Tora bhonasi ye1000 SB, inoenzana nemadhora gumi nemutengo, paunoshandisa mari inosvika madhora makumi maviri nemashanu kuchitoro chiri muSwagbucks.com/Shop. Iwe unofanirwa kupihwa yakaderera ye10 SB yekutenga iyi, iyo iwe yaunofanirwa kuzadza mukati memazuva makumi matatu ekunyoresa. MyGiftCardsPlus.com uye zvekutenga zvekutenga hazvikodzeri.